पावर बैंक किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् » Khulla Sanchar
पावर बैंक किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
सबैभन्दा पहिला तपाईँले साइज कत्रो किन्ने हो, छनौट गर्नुपर्छ। घरमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँले ठूलो साइजको लिन सक्नुहुनेछ। खल्ती तथा झोलामा हालेर यात्रामा निस्कनु छ भने सानो र हल्का साइजको किन्नुपर्छ।
बजारमा १० हजार एमएएच देखि २० हजार एमएएच क्षमताका पावर बैंक उपलब्ध छ। आफ्नो स्मार्ट फोन कति एमएएचको हो त्यही अनुसार पावर बैंक किन्नुपर्छ। २ हजार एमएएच ब्याट्री पावरको मोबाइलका लागि ४ हजार एमएएच पावर भएको पावर बैंक किन्नुपर्छ भने, ३ हजार एमएएच पावरको ब्याट्री भएको मोबाइल छ भने १० हजार एमएएचभन्दा माथिको पावर बैंक किन्नु पर्छ। १० हजार एमएएच पावर भन्दा माथिको पावर बैंकले २ वा सो भन्दा बढीसम्म मोबाइल चार्ज गर्न मिल्छ।
पावर बैंक किन्दा कुन ब्राण्डको हो ध्यान दिन आवश्यक छ। राम्रो कम्पनीको, राम्रो क्वालिटी भएको पावर बैंकहरु बजारमा खोज्नुपर्छ।
पावर बैंक किन्दा त्यहाँ दिएको सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ। त्यसमा टेम्पेचर प्रोटेक्सन, इनपुट ओभर भोल्टेज प्रोटेक्सन लगायतका कुराहरु लेखिएको हुन्छ। बजारमा १ हजारदेखि २० हजारसम्मका पावर बैंक पाइन्छ। सेतोपाटी